Indlu yamaplanga entle yasezintabeni eLofsdalen - I-Airbnb
Indlu yamaplanga entle yasezintabeni eLofsdalen
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLinn
I-Lofsdalen yidolophana elungele intsapho yasezintabeni eyi-500 km ukusuka eStockholm. Nantsi yonke into onokuyinqwenela iholide esebenzayo nengalibalekiyo ezintabeni. Le ndlu yamaplanga intle esentabeni isembindini weLofsdalen ibe xa ubona intlambo, ichibi iLofssjön kunye neentaba ezijikelezileyo. Indlu yamaplanga, elungele iintsapho ezimbini okanye inkampani enkulu, inesakhiwo esahlukileyo esinokukhanya kwemvelo okungena endlini.
I-Lofsdalen yidolophana ethe cwaka, elungele intsapho, ekwiikhilomitha eziyi-500 ukusuka eStockholm. Nantsi yonke into onokuyinqwenela kwiholide esebenzayo nengalibalekiyo ezintabeni. Indalo entle engachukumiswanga, edityaniswe nezinto ezigcinwe kakuhle kwizinto ezenziwayo ehlotyeni nasebusika zenza iLofsdalen ibe yindawo entle yokuya entabeni.
Ixesha lasehlotyeni nasekwindla eLofsdalen lihle kakhulu ekunyukeni intaba, ukuloba, ukuhamba ngebhayisekile entabeni, ukuhla, ukuhamba ngebhayisekile kunye nokubona indalo.
Le ndlu yamaplanga enamagumbi okulala amane kunye neendawo ezinkulu zokuhlala ikwindawo esezantsi kwentaba iHovärken kwaye iyibona kakuhle intlambo, ichibi iLofssjön kunye neentaba ezijikelezileyo.
Indlu yamaplanga inesakhiwo esahlukileyo esinokukhanya kwemvelo okungena endlini. Iindawo zokuhlala zale mihla ezinefenitshala entle.
Le ndlu yamaplanga ilungele intsapho enye okanye ezimbini okanye inkampani enkulu.
Ime embindini weLofsdalen kufutshane namathambeka e-ski, iilifti, iindlela zokutyibilika ekhephini, iindlela zokunyuka intaba, iindlela zokuhamba ngephenyane, iivenkile zokutya, ivenkile yezemidlalo kunye nokuqeshwa kwe-ski, iivenkile zokutyela, kunye nokunye.
Umbuki zindwendwe ngu- Linn